Usawoti ezifakwa onyaweni: ukwelashwa, izimbangela kanye nezimpawu
Izinhlungu nokuphatheka kabi ngesikhathi ukuhamba kungase kubonise khona izinkinga ezifana sebethule nosawoti kwisitaki. Ukwelashwa nokuvikelwa kulesi simo kufanele kube olunzulu futhi elungile, futhi kufanele uqale ngokushesha ngangokunokwenzeka. Izinyawo zethu - kuba sengcupheni ukuthi nsuku zonke uhlangabezana imithwalo esindayo. Ngakho-ke, kukhona ngokuvamile umuzwa kabi ubuhlungu uma uhamba.
Ngisho naseminyakeni eyishumi edlule, le nkinga yayetayelekile abantu abadala kuphela, kodwa kulezizinsuku lesi sifo singabonakala kula intsha. Ngaphezu kwalokho, imali usawoti wathola ngisho phakathi zesikole. Isizathu - umntwana ukhuluphele noma bandisa inkonzo ngokomzimba. Uma kuleli cala unyawo nemisipha wengane ampofu, kungagcina izinyawo flat, ekhuthaza sebethule nosawoti esikhathini esizayo.
Kungenzeka balahle unemizwa engemnandi ngesikhathi leso sifo kuyinto sebethule nosawoti emalungeni. Ukwelashwa, kubangela kanye izimpawu zalesi sifo ekulesi sihloko.
Abanye abantu bakholelwa ukuthi usawoti ngokweqile Ukudla kuphakamisa zokugula ezinjalo. Abanye bakholelwa ukuthi kukhona ubudlelwano phakathi sebethule nosawoti kanye khona sciatica womuntu, samathambo, arthrosis, osteoarthritis nezinye izifo ngokuhlanganyela. Eqinisweni, izimbangela zezinkumbulo le nkinga akulona iphuzu.
Ziyini izimbangela eziyinhloko zalokhu kasawoti ezifakwa ezinyaweni kuyinto isizinda womuntu hormone, izinkinga ne exchange izinqubo emzimbeni. Iningi miphumela zenzeka ne ngifundise ngesifo sikashukela, sifo, ukuvuvukala njalo kwesibindi nezinso. Ngo ukwehluleka kwezinso i- izinqubo secretory emzimbeni, ukuze kukhona inqwaba ka uric acid.
Ukuthuthukiswa okusheshayo of izimpawu zalesi sifo kungenzeka nge abangasebenzi noma asebenzayo kakhulu yokuphila, imikhuhlane, ukubhema nokusebenzisa kabi utshwala, izifo kohlelo endocrine, kukhuphuke okuqukethwe imikhiqizo inyama yokudla komuntu. Lesi sifo angadluliselwa futhi ngofuzo.
Ngokuvamile, usawoti imali izinzwani, isithende, amalunga omzimba. Lezi ezifakwa usawoti - lena isizathu esiyinhloko ukuvela isithende iqhubezela.
Zikhona nezinye izimbangela zalesi simo, njengoba sebethule nosawoti kwisitaki. Ukwelashwa okufanele kuphela onguchwepheshe, abazokusiza kubo ukuthola.
Izimpawu zesifo ingase ibe khona ehlukile. Ungashiyi ngaphandle ukunakekela ukubukeka ubuhlungu ngezinyawo uma uhamba futhi umzimba. Ukungakhululeki kungenziwa basakaza phezu lonke unyawo, futhi amanye amasayithi kuphela akho angase aphazamiseke. Ubuhlungu esiqine kwenzeke ekuseni, ngemva esokulala ebusuku. Nomuzwa ofanayo kulabo ezingavela uma umuntu evele izinyathelo ku isipikili. Futhi endaweni eziyinkinga angase zigcwala kancane, umbala kuyahlukahluka phezu kwalo. Zingashintsha futhi Gait komuntu kungenxa yokuthi isiguli uyakugwema ukunyathela kulezo zingxenye ngezinyawo, okuyinto ekhathalela.
Indlela esiphatha ngayo usawoti ezifakwa?
usawoti ezifakwa emilenzeni - kuyinkinga edinga uphethwe enemininingwane. Ngenxa yale njongo, sebenzisa cwaningo radiographic, esiza ukunquma degree of ukugcwala onyaweni. Kudingeka nokuba azokuqhubela kwegazi kwamakhemikhali wokuthi yadalwa nezinye pathologies sina.
Nge ukuzinza lokugayeka kokudla kanye therapy hormone kumele iqale usawoti ezifakwa emalungeni. Ukudla, izidakamizwa, abantu kanye nezinye izindlela zokwelapha ungalunga, kodwa ukukhetha indlela ukubhekana nale nkinga ukuba udokotela, ngemuva kokwenza ucwaningo oludingekayo. Ngokuvamile esetshenziswa ekwelashweni izidakamizwa ezisiza ukuthuthukisa umthamo wegazi ogciniwe ezicutshini zomzimba. Ngaphezu kwalokho, ingasatshenziswa analgesic nezidakamizwa eqeda ukuvuvukala. ukusetshenziswa ngempumelelo Novocaine, potassium iodide, hydrocortisone. Kubalulekile kakhulu ukuqeda isisindo okweqile, okuyinto eshubisa lesi sifo.
Ukuze yokwelashwa okuphumelelayo kuzodingeka ukulandela ukudla ekhethekile, esakhiwa yobisi isitshalo ukudla. Ukudla kufanele kube kefir samanje, cottage shizi, ukhilimu omuncu, imifino kanye nezithelo, amakhambi fresh. Ivunyelwe inyama encane iphilile izinhlanzi (hhayi izikhathi ezingaphezu kwezintathu ngesonto).
Kusukela imenyu nsuku zonke kufanele ayifakiwe ethosiwe, ukudla ngibhema ukudla okunamafutha, utshwala. Kuyasiza ukuba badle izithelo ezifana Persimmon, ikhabe, ikhathalophu, plums. Kodwa amagilebhisi kufanele ayifakiwe ngokuphelele.
Ukwelashwa nokuvikelwa usawoti ezifakwa ezithendeni, emadvolo netintwane futhi luqhutshwa ezifana izindlela eziphumelelayo njengoba:
- radiotherapy. Sebenzisa ephezulu ifrikhwensi, ukwelashwa laser, ukwelashwa kazibuthe.
- Shock-wave indlela. Ingqikithi uphathwa ukuthi ezindaweni inkinga wenza ukuba negalelo elinamandla ngosizo ultrasonic ukwelashwa voln.Takoy indlela siyasebenza kakhulu, kodwa abanye Izimo, ezifana abantwana, umdlavuza, ukopha iziyaluyalu.
- Ukwelapha Ukuzivocavoca. umzimba okujwayelekile ngokomzimba ukusiza ukuthuthukisa isimo jikelele kanye okudambisa ubuhlungu emilenzeni.
- Foot massage. inqubo efanele massage kuthuthukisa kwegazi futhi usiza ukuqeda imali usawoti.
- Ukubuyiselwa izicathulo esiku wamathambo noma usebenzisa insoles ekhethekile.
- Izindlela Traditional izindlela zokwelapha ezingahlanganisi ngaphezu izindlela eziyisisekelo.
Zokupheka of imithi yendabuko ingasetshenziswa njengenhlangano ukwelashwa okwengeziwe ukuze isifo esinjengo sebethule nosawoti. Ukwelashwa nokuvikelwa amakhambi abantu kumele kuqale ngemva kokukhuluma nodokotela.
I ukumnika of parsley noma isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi
Imbewu parsley noma isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi njengendlela tincture esivivaneni ukuze kuthuthuke ukuzinza yokusetshenziswa pheshana emathunjini, aqede ukonga owengeziwe. Ukuze silungiselele lokhu ukumnika imbewu isipuni spoon uthele ingilazi yamanzi abilisiwe. Thatha kabili ngosuku ingilazi.
eyikhulu amagremu ishidi wathela amanzi (150 ml), abilisiwe at ukushisa low for isigamu sehora. Phikelela nokuhlunga. Kusho kuthathwe esiswini esingenalutho ekuseni isigamu inkomishi.
Uju, cranberry nesweli
Thatha iphawundi cranberry, 200 amagremu garlic, uju ilitha (liquid). Cranberry frays ne garlic, engeza uju. Phuza umuthi kathathu ngosuku ngaphambi kokudla. Le nhlanganisela kusiza ukunciphisa ukuvuvukala usawoti imali.
Lungiselela ukumnika oqinile amaqabunga currants, uju. Kusho hhayi kuphela ngempumelelo, kodwa futhi okumnandi.
Horse onsundu ngesimo isithako nomuthi
Ukuze kulungiswe izidakamizwa ezifana e nengxenye-litre ingilazi esitsheni ibekwe chestnut, okufanele zigezwe futhi pre-gaya. Sigcwale amanzi. Sidinga ukugcizelela izinsuku ezingu-14 endaweni emnyama, kunyakaze njalo. ukusetshenziswa isikhathi eside ka ukumnika enjalo kungaba okudambisa ubuhlungu phakade.
Kuyadingeka ukuthatha emabhulashini eziyisithupha Lilac, uthele ilitha lamanzi abilayo. Emva lwaluyophola izindlela ukubeka kule esiqandisini izinsuku ezintathu. Sebenzisa isipuni imithi ngaphambi kokudla.
Fitizela uju kanye nosawoti
Le ndlela kusiza ukuphungula emizweni ezibuhlungu. Thatha nenani elilinganako usawoti esihle noju axutshwa. Ingxube wafakwa isicelo kwi ngendwangu yelineni futhi zihambisana ngokucophelela nge endaweni obuhlungu. Abeke oilcloth phezulu futhi zihambisana nge isikhafu efudumele noma iduku, shiya ngobusuku obubodwa, geza ekuseni. ukulibopha okunjalo kufanele kwenziwe njalo.
Poultice lwesinaphi noju
Hlanganisa lwesinaphi nezinyosi (isipuni) ingezwe camphor (wezipuni ezintathu). I-ejenti okuholela lisetshenzisiwe leaf iklabishi isetshenziswa endaweni eziyinkinga, zihambisana isikhafu efudumele futhi washiya amahora amathathu. cindezela enjalo ngokushesha aqede ubuhlungu, ikhuthaza ukunciphisa ukuvuvukala.
Emathileyi of limes
Phakathi zom Linden, udinga ukuthatha amahlamvu nezimbali, uthele amanzi abilayo futhi sipheke ukushisa low cishe ihora. Lokhu ukumnika ikhuphuka imilenze imizuzu engu-30. Le nqubo iyaphindwa izinsuku ezine zilandelana usebenzisa umhluzi efanayo, okuyinto osuke usushisa kakade. Kuyinto kudingekile kuphela ukuze uthele amanzi kuyo. Emva inqubo, wagqoka amasokisi kanye ulale.
Indlela ukwelapha imali usawoti phezu ngezinyawo esebenzisa amafutha? Lo mkhiqizo siyasebenza kakhulu ekubhekaneni ubuhlungu ukubhoboza. Kusukela ucezu okunosawoti ubhekeni cut ipuleti lisetshenzisiwe ngezinyawo, zihambisana ne oilcloth futhi zihambisana isikhafu kusengutsheni yoboya. Ngemva umkhiqizo, enikeza umsoco babe ungenalutho, cindezela kungaba zisuswe.
Zikhona izindlela eziningi ngemithi yesintu isetshenziselwa ukuqeda le nkinga. Kodwa ekwelapheni usawoti ezifakwa esithendeni nezinye izingxenye unyawo zizosebenza kuphela uma uhlaziye ngokuphelele yokuphila yakho nokudla. Futhi, ungakhohlwa ukuthi izindlela zesintu kufanele kuhlanganiswe ukwelapha ngokwendabuko.
Nalesi sifo, njengoba ekuqongeleleni nosawoti ngezinyawo, ukuphathwa kuyoba kakhulu kusheshe kakhudlwana ukube umzimba njalo:
- Njengoba ehlezi esihlalweni esimweni ukhululekile udinga ukuzama ukukhulisa ezihlukahlukene lezinto kusukela phansi usebenzisa izinzwane zakho. Ungasebenzisa amapensela, iphepha, amabhola amancane.
- Amakhemini ukuthengisa ezinamasondo ekhethekile ezifakwa phakathi kwezinzwane. Hamba nabo isikhashana.
- Ungazama ukwenza ukunyakaza uzwane ngamunye.
isifo ezinjalo ezingathandeki njengoba ekuqongeleleni nosawoti ngezinyawo, okuyinto ukwelashwa wenziwa usebenzisa izidakamizwa nezinye amasu udinga isineke nokulandela njalo nazo zonke izincomo udokotela. Ngakho uma ukungakhululeki ngesikhathi ukuhamba kuyadingeka ukuze ubone onguchwepheshe, ngoba ukwelashwa esifike ngesikhathi kungasiza unqobe sifo umugqa omfushane futhi ngikuvimbele kungenzeki esikhathini esizayo.
Amavithamini: Complivit ". Yokusetshenziswa.
Ukulwa esiphumelelayo ekuvimbeleni ubuhlungu: izidakamizwa "Nurofen Gel '